25 မေလ 2016
စေးကပ် post ကို By အိုလီဗာ Bienkowski Posted in, Campañas permalink
25 ။ မေလ 2016 အိုလီဗာ Bienkowski
စေးကပ် post ကို By အိုလီဗာ Bienkowski On 25 ။ မေလ 2016
လာ့စ်ဗီးဓါတ်ပုံများက de los artículosက de prensa
သတင်းအချက်အလက်က de VIDEO က de ရေဒီယိုက y ရုပ်မြင်သံကြား
"da အိမ်တော်၌ NSA က" y "Estados က de Américaရှတာဇီ" estaban en Las သိပ်မရှိပါဘူး de la embajada estadounidense en ဘာလင်က y otros consulados estadounidenses en Alemania, Dusseldorf, Frankfurt က y Hamburgo incluyendo ။ la razónက el descarado espionaje de la NSA က y က la inteligencia estadounidense ။
la NSA က su estrategia က de si es necesario မသန်စွမ်း luchar Contra el terrorismo ထိန်းချုပ်defendió။ Además, se justifica diciendo: "Si မျှ Tien nada Que ocultar, အဘယ်သူမျှမ Tien nada Que temer" ။ por desgracia, la vigilancia de la NSA က va mucho စရဖ alla en cuantoala lucha Contra el terrorismo ။ su teléfono, Skype ကို, Whatsappgespräche puede SER monitoreado တစ် pesar က de Que မျှ Tien nada Que ver con los terroristas, el principio က de "amigo 3rd ဘွဲ့" en con အခြေစိုက်စခန်း။
por otra Part, se impidió gracias တစ် estas técnicasက de monitorizacion တစ်ကိုယ်တော်4Ataques ။ ¿ခြိုငျ့ la Pena nuestra privacidad မသန်စွမ်း una aparente pero အဘယ်သူမျှမအစစ်အမှန်က de seguridad abandonar? Ayudante က de pixels မျှခရီး Que es por eso Que hemos puesto en marcha esta campaña။ သာလွန် del cocinero del hombre de la စီအိုင်အေက de Alemania la salida de la Part: el primer éxitodespués del 13 de la လုဇမြို့တည်းဟူသောProyecciónက de, el ritmo y က una Gran en semanal cobertura က de los medios ။
Videos အ de la campaña y က Apariciones en ရုပ်မြင်သံကြား
pixel ကူညီ & Oliver ° ZDF 37 အားဖြင့်တိုတောင်းတဲ့မှတ်တမ်းရုပ်ရှင်မှာတော့သူကဘာလင်အတွက်အမေရိကန်သံရုံးမှာအလင်း projection ဖွဲ့စည်းပုံကိုပြသနေသည်။ Dusseldorf, စာနယ်ဇင်းနှင့်အတူအစည်းအဝေးအတွက်တစ်ဦးဘန်ကာ၌သူ၏ပရိုဂျက်တာများစုဆောင်းမှုထဲမှရဲများရောက်ရှိလာနှင့်အတူအဆုံးသတ်ရမည်ဟုအလင်းအနုပညာကာတွန်း "da အိမ်တော်၌ NSA က" ဟုအဆိုပါ၏အမှန်တကယ်စီမံကိန်းကို။
အမေရိကန်သံရုံးမှာ Kim က Dotcom နှင့်အတူ pixel ကူညီ။ အမေရိက၏ယူနိုက်တက်ရှတာဇီ။ Der Spiegel "DerPakt" တွင်ထုတ်ဝေသည်။ ဒီအိမ်လုပ်ဗီဒီယိုထဲမှာဘာလင်အတွက်အမေရိကန်သံရုံးကဆန့်ကျင်လုပ်ဆောင်ချက်တစ်ခုပြသနေသည်။ မြို့ရိုးပေါ်မှာအလင်းအိမ်: "အမေရိက၏ယူနိုက်တက်ရှတာဇီ", ဒါပေမယ့်ရဲမှသာကိစ္စရပ်များ။
နှစ်ချက် projection တိုက်ရိုက် WDR စတူဒီယို Anke Engelke ။ ဤသည်အိမ်လုပ်ဗီဒီယိုလိုဂိုနှင့်အတူဆလိုက် "da အိမ်တော်၌ NSA က" စုဝေးစေနှင့် Bonn နှင့်ဗီယင်နာရှိကုလသမဂ္ဂအဆောက်အဦရှေ့တွင် projected ခဲ့ကြသည်ကိုဘယ်လိုပြသထားတယ်။
Light ကအနာဂတ်အမေရိကန်သံရုံးဟမ်းဘတ်, နင်း Polizeiboot.Das ဗီဒီယိုကိုဗီယင်နာအတွက် NSA ကဆန့်ကျင်ကန့်ကွက်ဖို့သြစတြီးယားခေါ်ဆိုခြင်းဖြင့်တစ်ဦးလှပသောသြစတြီးယားလယ်ယာအတွက်မှာ Oliver နှင့်စက်တင်ဘာလပြသထားတယ်တွေ့ဆုံခဲ့သည်။ ထို့နောက်သူတို့လှေဖြင့်ရောက်ရှိသောအမေရိကန်ကောင်စစ်ဝန်ရုံးရှေ့တော်၌, ဟမ်းဘတ်တွင်တည်ရှိပါသည်။ သငျသညျ NSA ကအဆိုပါလိုဂိုဖို့ဖြစ်ပါတယ်ရှိရာတစ်ဦးသြစတြီးယားအလံ, configure ။ အဆိုပါအရေးယူဆောင်ရွက်မှုကိုအခြားတူသောပြီးဆုံး: ရဲနှင့်အတူ။
por မျက်နှာသာ, comparta nuestros proyectos en Facebook အက y တွစ်တာ! si usted apoya nuestra causa, tendríamosမသန်စွမ်း cualquier donativo agradeceria Que seguir podamos က de forma အမြဲတမ်း nuestras Campañas။ ယူရိုမသန်စွမ်း hacer una diferencia pocos Incluso unos! Compartir es Buenos ။ por nuestro trabajo က de caridad apoye မျက်နှာသာ။ တစ်ကိုယ်တော် Tien Que utilizar este Paypal, သာ. ကောင်း၏ရာဌာန, Indiegogo ဏ la transferencia clásico။
Cuenta မသန်စွမ်း Donaciones:
IBAN ကုဒ်ကို: DE70 8105 3272 0641 0339 40
Titular: Pixel ကူညီ Foundation မှအကျိုးအမြတ်အတွက်မဟုတ်သော GmbH သည်
ကျွန်တော်တို့ရဲ့လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက် betterplace.org မှာ "Pixel ကူညီဖောင်ဒေးရှင်းမှကင်ပိန်းခြုံငုံသုံးသပ်ချက်" အတွက်လှူဒါန်းမှု
Campaña Contra el estado de vigilancia ဇူလိုင်လ 15th, 2016အိုလီဗာ Bienkowski